ओटोमोबाइल इन्जिन समस्या को सुरूवात संग पक्कै देश को एक चिसो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने प्रत्येक चालक, सामना गर्नुपरेको थियो। भारी चिसो भण्डारण एकाइ र शक्ति एकाइ को एक अस्थायी विफलता सक्छ, र पनि व्यक्तिगत तत्व को विनाश को मामला मा प्रतिकूल परिणाम छ। यस्तो घटनाहरू जो बीच विधिहरू धेरै र लोक हो फरक हालतमा, मदत रोक्न। तथापि, विशेषज्ञहरु अझै पनि साक्षर छ पूर्व-सुरु इन्जिन हीटर, प्रयोग गर्न सिफारिस, स्थापना इन्जिन कक्ष र भर्नको एकै समयमा गर्न हानि छैन शक्ति एकाइ को सक्रियता समस्या को मोटरहाक्ने व्यक्ति बचत गर्नुहोस्। यस्तो प्रणाली को बजार मा आर्टिसनल छन् धेरै जो विभिन्न संस्करण मा प्रस्तुत छ। यस कारण, यो जो बीच एक विशेष ठाउँ कम्पनी Defa कब्जा छ एक सिद्ध उत्पादकहरु, सम्पर्क गर्न सिफारिस गरिएको छ।
पूर्व-लन्च तंत्र Defa बारेमा सामान्य जानकारी
हालै सम्म, ताप सिस्टम को preheating ईंन्धन additives कार को क्षमता वृद्धि गर्ने साथ पावर प्लान्ट को चिसो सामना को एक एकदम शंकास्पद हालतमा छ। कम्पनी को नर्वेजियन विकासकर्ताहरूले Defa आफ्नो प्रभावकारिता र सुरक्षा पुष्टि, यस्तै उपकरणहरू को एक गुणात्मक नयाँ स्तरमा जुटाउने व्यवस्थित। यो ब्रान्ड अन्तर्गत आज विभिन्न मोडेल को लागि उपयुक्त हो कि एक, संकुचित वातावरण मैत्री र कार्यात्मक तंत्र जारी। बिजुली preheater 220 पनि शक्ति आपूर्ति उपकरणमा एउटा विश्वसनीय जडान कारण जो, एक अद्वितीय मिनी प्लग प्रविधि छ। केही embodiments प्रणाली connectors, बिजुली 220 / 230V लागि Armored केबल आधारमा कार्यान्वयन। यांत्रिक र थर्मल सुरक्षा साथै जडान हार्डवेयर पनि पनरोक खोल हुन्छ। प्रयोगकर्ता मात्र सुझाव विन्यासको एक मा सिस्टम को ठीक स्थापना गर्न सक्दैन।
preheaters सुरु प्रजाति
तरल पदार्थ र बिजुली - उपकरणहरू दुई मुख्य समूह विभाजित छन्। तिनीहरूले आपूर्ति को विधि मा फरक। तरल पदार्थ हीटर त विशेष दहन कोठामा को संयन्त्र को कार्यका लागि प्रदान गर्दछ, पेट्रोल वा डिजेल मा सञ्चालन। यस्तो एग्रिगेट विद्युत analogs तुलनामा अपेक्षाकृत प्रभावशाली आयाम छन्, तर तिनीहरूको indisputable लाभ पूर्ण स्वतन्त्रता समावेश गर्नुहोस्। स्थापना काम facilitated छ त यस्तो उपकरणको लागि, केबल आवश्यकता छैन। पालो मा, preheater 220 एक ब्याट्री प्याक वा हल्का चुरोट संयोजनमा सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो छ, कुनै पनि मामला मा, प्रयोगकर्ता ब्याट्री प्याक को चिसो, या लाइटर चुरोट विरुद्ध बीमा गर्नुपर्छ र काम गर्ने छैन।
स्थापनाको लागि तयार
यांत्रिक कार मालिक को स्थापना को समयमा दुई समस्या समाधान गर्नुपर्छ। पहिलो, जो मार्फत पूर्व-अपरेसन शक्ति स्रोत गर्न बिजुली हीटर जडान हुनेछ आउटलेट को ठंडा सिस्टम नाली मा एक प्वाल बनाउन, र दोश्रो, माउन्ट। एकीकरण उपकरणको लागि प्राविधिक प्वालहरू सन्दर्भमा, यो धातु लागि कटर रूपमा एक विशेष उपकरण संग गठन गर्नुपर्छ। तिनीहरूले हीटर को आयाम मेल खाँदैन भने पनि, यो एडेप्टर र एडप्टर मार्फत जडान गर्ने क्षमता परीक्षण गर्न अर्थमा बनाउँछ - यो केही सर्किट पहिले नै प्लग संग प्वालहरू छन् कि याद गर्नुहोस् महत्त्वपूर्ण छ। ड्रिलिंग अघि जाडोमा जम्न नदिने तरल बस्तु र अन्य भोकमरी हुनुपर्छ प्राविधिक तरल पदार्थ र जो काम लाइन मा निरन्तर चलिरहनु सक्नुहुन्छ तेल।
अब तपाईं एक पर्खाल आउटलेट मा सार्न सक्नुहुन्छ। माथि उल्लेख रूपमा, नयाँ उपकरण मा Defa कम्पनी एक मिनी प्लग उपकरणहरू प्रयोग गर्दछ। यस्तो आउटलेट स्थापना गर्ने-बोर्ड mains राखिएको छ जो अगाडि बम्पर, एउटा सानो प्वाल प्रदर्शन गर्नुपर्छ। तथापि, एउटा छुट्टै preheater सकेट स्थापना भित्र लाइन मा प्रदर्शन गर्न सक्छन्। यो embodiment बिजुली आपूर्ति विफलता सबै विद्युत उपकरण को विफलता खतरामा पार्न सक्छ को मामला मा कम विश्वसनीय छ देखि तर, ब्याट्रि गर्न उपकरणको प्रत्यक्ष जडान वेवास्ता गर्नुपर्छ।
टाई-मा पाश ठंडा सिस्टम assembling द्वारा क्लासिक संस्थापन विभिन्न तरिकामा पनि समावेश छ। एक होल गठन गरिएको छ जसमा तरिका बिना पनि जडान screwing वा एक spacer Defa संयन्त्र द्वारा प्रभावित हुन सक्छ। पहिलो मामला मा Preheater छेद मा स्क्रूड र पक्षलाई थप फास्टनरों द्वारा सुरक्षित छ। spacers विकल्प प्रयोग गरेर स्थापना थप जटिल छ, तर व्यवहार मा यो थप प्रयोग गर्न विश्वसनीय छ। केवल सर्किट मा उपकरण प्रविष्ट गर्न आवश्यक र संयन्त्र Strut सक्रिय screwing एक मुद्दा नबनाई के गर्न सक्दैन, तर यो समय को मामला मा भने - स्वतः चढाउनुहोस्।
त्यहाँ एक कृत्रिम ठंडा सिस्टम सर्किट मा एकीकृत गर्न सकिन्छ कि मोडेल छन्। भन्ने एक अतिरिक्त सर्कल पम्प, हीटर समारोह प्रदान गर्न विशेष डिजाइन छ, छ। यस मामला मा, यो एक पंप पम्पिंग छ जो एक पंप, एक preheater प्रयोग गर्न मनमोहक छ। यो कन्फिगरेसन को कूलेंट एक क्रमिक तर स्थिर ताप संग निरन्तर चलिरहनु गर्न अनुमति दिन्छ। कृत्रिम क्षेत्रीय सम्मेलनमा मामलामा थप प्रयास आवश्यक छ, तर सञ्चालन समयमा थप कुशल छ।
सहायक उपकरणहरू स्थापना
थप optsional उल्लेखनीय तापमान सेन्सर र ब्याट्री चार्ज एकाइ बीचमा। यी घटक बिना, केही अवस्थामा तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ, तर प्रणाली विश्वसनीयता मा गुमाउनु र सञ्चालनको सुख हुनेछ। तापमान सेन्सर, उदाहरणका लागि, हीटर र बिजुली आपूर्ति एकाइ स्वचालित गर्न आवश्यक र बिजुली ब्याट्री सिस्टम बनाउँछ छ। सेन्सर माउन्ट मुख्य एकाइ Defa ताप जस्तै सिद्धान्त अनुसार उत्पादन गरिएको छ। Preheater को ठंडा सर्किट मा एकीकृत छ, र जहाँ सम्भव पनि सम्मिलित हुनुपर्छ यो अर्को, र तापमान उपकरण नाप्ने। यसबाहेक, यो प्वाल कारखाना मार्फत एक सर्किट मा सम्भव संस्थापन हो भने, सेन्सर स्थापना गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका हो। चार्ज एकाइ ब्याट्री अर्को स्थित छ - यो फ्रेम र इन्सुलेशन सामाग्री माउन्ट, एक विशेष समतल क्षेत्र को लागि प्रदान गर्नुपर्छ।
डिजेल प्रणाली स्थापना विशेषताहरु
यस्तो उपकरणहरू काम कार्यमा भिन्न छन् र तिनीहरूलाई सामना। विशेष तिनीहरूले गंभीर frosts बेला इन्धन मा भंग जो paraffins, को उछाल को जोखिम हटाउन purposefully प्रयोग गरिन्छ। , यसको विपरीत मा पारंपरिक डिजेल हीटर गर्न विधानसभा सन्दर्भमा फिटिंग ईंन्धन सर्किट र ब्लक मा सिधै एकीकृत। सबैभन्दा डिजेल preheater मा राम्रो फिल्टर नजिकै माउन्ट। तरल यस भाग मार्फत बित्दै गर्दा यसको ताप ठाउँ लिन्छ। यस प्रकार को साधारण वाहक मोडेल हीटर ईंन्धन को रिमोट क्षेत्रमा स्थापित छन्।
नियन्त्रण सुरु preheater
नर्वेजियन निर्माता असामान्य डिजाइन हीटर, तर पनि व्यवस्थापन प्रणाली को मात्र होइन विकास लागि प्रसिद्ध। मानक पूर्व-लन्च बिजुली हीटर, उदाहरणका लागि, एक विशेष नियन्त्रण एकाइ मार्फत केही समय अन्तराल मा काम गर्न प्रोग्राम गर्न सकिन्छ। साथै, प्रयोगकर्ताले उपकरण सक्रिय गर्न सक्नुहुन्छ र एक विशेष रिमोट नियन्त्रण मार्फत स्वतन्त्र काम।
लागि जहाज जटिल नियन्त्रण अन्तरक्रिया र हीटर एक विशेष रिले प्रयोग गर्दछ। आवश्यक भएमा, यो कार्य गर्न सक्छ र सम्पूर्ण वाहन ताप संरचनाको नियन्त्रक। यस्तो एउटा योजना इन्जिन preheater को सानो घर मा हीटर संग समानान्तर मा सञ्चालन हुन सक्छ। तर, व्यवस्थापन पनि एक अलग क्रममा गरिनेछ - वा कम्प्युटर मार्फत, वा टाढाको नियन्त्रण गरेर।
Defa प्रणाली मा सकारात्मक प्रतिक्रिया
सदस्य साधारण यस्तो प्रणाली, को जहाज पावर ग्रिड आफ्नो विश्वसनीयता र काम को समन्वय को विश्वसनीयता भन्छन्। अभ्यास शो रूपमा, न्यूनतम समय अन्तरालहरू अधिकतम तापक्रम प्राप्त र रूपमा चाँडै लागि हीटर ताप शक्ति बोट बुझ्छ। चिन्ह लगाइयो र उपकरणहरू को संरचनात्मक लाभ Defa। Preheater यो चिन्ह एक Ergonomic आकार प्राविधिक विचारशील विधानसभा द्वारा र एकै समयमा शारीरिक विश्वसनीयता मा विशेषता छ।
यस्तो हीटर को मालिक अनुसार दुई प्रमुख कमियां छ। पहिलो पनि पूर्वाधार प्रबन्धकको कार्यान्वयनको जटिलता छ। यो बिजुली मोडेल लागू हुन्छ। तिनीहरूले प्रयोग गर्न सजिलो, तर उच्च नियन्त्रण हासिल गर्न रिले र बोर्ड नेटवर्क देखि विद्युत लाइनको एक बरु troublesome स्थापना गर्न हुनेछ। दोस्रो drawback - यो preheater बेचिएको मा जो मूल्य छ। मूल्य मध्यम प्रदर्शन सेट 5-7 हजार छ। RUB। तुलना लागि, चिनियाँ समकक्ष 2-3 हजार लागि उपलब्ध छन्। अर्को कुरा गुणस्तर र यी उत्पादनहरु को स्तर तुलना छैनन् भन्ने छ।
यस प्रकारका हीटर प्रयोग मोटर वाहन विशेषज्ञहरु को कुनै सानो भाग मा पक्कै मा अझै पनि छ। को संदेह मनोवृत्ति कारण जिम्मेवार शक्ति संरचनाको इन्जिन कक्ष मा हस्तक्षेप एक जोखिमपूर्ण उद्यम सिद्धान्त छ भन्ने तथ्यलाई छ। तैपनि, जोखिम धेरै सम्भव मुक्त ~ technologists Defa प्राप्त गर्न। यो कम्पनी प्रारम्भिक खण्डको पनि परिमार्जन सुरक्षा धेरै डिग्री छ Preheater। यो पनि शारीरिक अधिभार र वृद्धि सुरक्षा संग इलेक्ट्रनिक प्रणाली विरुद्ध बीमा छ जो मेकानिक्स, लागू हुन्छ। अर्को कुरा स्थापना मा उल्लंघन आफूलाई adversely हीटर को सञ्चालनको गुणस्तर असर गर्न सक्छ भन्ने छ।
बायाँ-hander दायाँ-handers फरक छ: विशेषताहरु रोचक तथ्यहरू, सल्लाह
मास्को मा के गर्न, र आफ्नो समय कसरी लिन: मुख्य आकर्षण, हिँड्छ, मनोरञ्जन
प्लास्टिक Windows misted र किन कसरी जोगिन छ?
एक पानीको पानी तल - यो कस्तो छ?
को दोकान जानुहोस्: 28 जीन्स आकार - के हो?